Xog: Xafiiska Farmaajo oo ku adkeysanaya inay socdaan wada-hadallada ROOBLE - Caasimada Online
Home Warar Xog: Xafiiska Farmaajo oo ku adkeysanaya inay socdaan wada-hadallada ROOBLE
Xog: Xafiiska Farmaajo oo ku adkeysanaya inay socdaan wada-hadallada ROOBLE
Muqdisho (Caasimada Online) – Xafiiska madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku adkeysanaya inay weli socdaan wada-hadallada ra’iisul wasaare Rooble.
Caasimada Online ayaa og in wada-hadalladaas ay burbureen kadib markii Farmaajo uu ku adkeystay in shaqsi isaga ku xiran loo magacaabo taliyaha NISA, sidoo kalena la beddelo wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur.
Hase yeeshee, mas’uul ka tirsan Villa Somalia oo codsaday inaan la magacaabin ayaa BBC-da u sheegay in wada-hadallada ay wali socdaan, islamarkaana uu filayo inay guul ku soo dhammaadaan.
“Waxaan bogaadineynaa dedaallada ay wadaan guddoomiye Maxamed Mursal iyo madaxweyne Axmed Qoor Qoor. Waxaan ku kalsoonahay dedaalka socda in uu guul ku dhammaanayo,” ayuu yiri sarkaalaasi oo ka gaabsaday in magaciisa.
Xafiiska ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaan illaa hadda ka hadlay burburka ku yimid wada-hadallada.